Tunisia inzvimbo inotyisa inoshanya yekuRussia kune bhajeti
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Tunisia inzvimbo inotyisa inoshanya yekuRussia kune bhajeti
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Resorts • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Tunisia Kupwanya Nhau • Akasiyana Nhau
Kubva munaNdira kusvika Mbudzi 2019, vangangoita 632,000 veRussia vanozorora vakashanya Tunisiya. Vanenge 3000 vanotarisirwa kuita izvi mwedzi waZvita usati wapera. Uku ndiko kuwedzera kwe5% muhuwandu kubva gore rapfuura.
Sekureva kwemusoro wehofisi yenyika yekushanyirwa yeTunisian, vangangoita mamirioni mapfumbamwe vagari vekunze vanenge vasvika muTunisia mukupera kwegore.
Russia iri panzvimbo yechipiri muhuwandu hwevagari vanoshanyira Tunisia. France inouya kutanga. Germany inouya yechitatu.
Kazhinji, maRussia anoenda kuzororo kuTunisia kwemazuva 7-10, vachisarudza iwo ese anosanganisira matatu-nyeredzi kana ina-nyeredzi mahotera. Vazhinji vevashanyi vanobva kuRussia vanouya nemhuri.
Tunisia inozivikanwa nevanhu vakura, sezvo nzvimbo dzekugara dzenyika ino dzinopa zvirongwa zvehutano hwakanaka. Zviremera zveTunisian zvekushanya zviri kuronga kushandura kuyerera kwevashanyi kuita kwegore rese, kuitira kuti parege kuve nekukwira nekudzika muhuwandu hwevashanyi vekunze.